सरकारले जिस्कायाे उखु किसानलाई : अझै पाएनन् भुक्तानी !
काठमाडौं : चिनी मिलले सम्झौता पालना गरेका भए मंगलबार (माघ ७) भित्र उखु किसानले पुरानो बाँकी सबै भुक्तानी पाउनुपथ्र्यो। सरकारले दिलाएको विश्वासपछि त्यही आसमा उनीहरू आन्दोलन त्यागेर पुस १८ मा जिल्ला फर्किएका थिए। तर, गरिब किसानलाई फेरि झुट बाेल्याे सरकारले आठ चिनी उद्योग, १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ। आफैंले तोकेको म्यादमा जम्मा ३ उद्योगले १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
हामीले जति प्रयास गरे पनि उद्योगीहरू अटेर गरी सम्पर्कमै आउन मानेनन्’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चिनी उद्योगबाट अझै १ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तान हुन बाँकी छ।’ अटेरी उद्योगीविरुद्ध कस्तो कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ। यसै साता मन्त्रालयका तर्फबाट कठोर नीति अवलम्बन गर्ने संकेत स्रोतले गरेको छ।
२०७० सालदेखिको बक्यौता रकम पाएका छैनन्। रकम प्राप्त गर्न बर्सेनि स्थानीयस्तरमा आन्दोलन गरे पनि सुनुवाइ नभए पनि उनीहरूले यही पुस १० गतेदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा साताव्यापी आन्दोलन गरेका थिए। उखु किसान संघर्ष समितिको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा उद्योग मन्त्रालयले पुुस १८ गते लिखित सम्झौता गर्दै सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराइदिने वाचा गरेको थियो।
समितिका सचिव हरेश्याम रायले सरकारले तोकेको समयमा उद्योगीले बक्यौता रकम उपलब्ध नगराएकाले किसानलाई संगठित गरी पुनः राजधानीमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा लागेको बताए। ‘सहमतिअनुसार बक्यौता रकम माघ ७ गतेभित्र उपलब्ध भएन, राज्यले बाचा पूरा गरेन’, उनले भने, ‘पीडित किसानलाई संगठित गरी अब वारपारको आन्दोलन गर्न निकट समयमै राजधानी आउँदै छौं।
कृषिमन्त्री लाचार : उखु किसानको २१ करोड खाएर कांग्रेस सांसद फरार !
उखु किसानको पैसा नदिने व्यापारीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयको आदेश
चिनी उद्योगका मालिकलाई खोज्दै छौँ, किसानको पैसा दिलाउँछौँ : उद्योगमन्त्री भट्ट
उखु किसानको ५० करोड नतिर्ने सुगर मिलका मालिकले विद्युतका ३५ आयोजना अलपत्र पारे
उखु किन्न सरकारले चिनी उद्योगलाई दिएको ४५ करोड सापटी स्वाहा
यी हुन् किसानको २१ करोड रुपैयाँ नतिर्ने कांग्रेसका उपनेता
उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीमाथि कारवाही गरिन्छ : काेमल वली
उखु किसानद्धारा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन